“မြန်မာပြည်ကအခွန် တွက်နည်း” တဲ့ ......ခုမှသိတော့တယ်..... - MM Live News
“မြန်မာပြည်ကအခွန် တွက်နည်း” တဲ့ ……ခုမှသိတော့တယ်…..
မနေ့က မြို့နယ် အခွန်ရုံးစီက ဆင့်ခေါ်စာလေးရောက်လာလို့ ထိုစာရွက်ကလေးကို လက်မှာကိုင်ပြီး ပြည်သူချစ်သော ပြည်သူ့အစိုးရထံသို့ နိုင်ငံသားကောင်ပီသစွာ အခွန်သွားဆောင်ဖို့ တာမွေမြိုနယ်အခွန်ရုံစီကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
ရုံးရောက်တော့ ဒုဦးစီးမှူး အစ်မနဲ့ တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်တွေ့စုံခွင့်ရခဲ့ ပြီး အစ်မက ဝင်ငွေခွန် သတ်မှတ်ကောက်ခံဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့မေးခွန်တွေကို စတင်မေးပါတော့တယ်။
ဘယ်လောက်ပေးလည်း…..စရိတ်ငြိမ် ၆၀၀၀၀ ပါခင်ဗျား…..
တစ်ခြားအခွန်တွေရော….အမှိုက်ခွန် ၁၂၀၀၊ရေခွန် က ၁၅၀၀ပါခင်ဗျား…..
အခွန်ဒုဦးစီးအစ်မက လိုအပ်တာတွေကျွန်တော့်ကိုမေးပြီး ရာခိုင်နှုန်း အချိုးအစားတွေနဲ့ ပေးဆောင်ရမဲ့ငွေကို ဆက်တွက်နေလိုက်ပါတယ်။
တွက်ပြီးတဲ့နောက် ကျွန်တော်ဘက်ကို လှည့်ကြည့်ပြီး ၅ သိန်း ကျော် ၆ သိန်းလောက်တော့ ဝင်ငွေခွန်သွင်းရမယ် တက်နိုင်သလားဆိုပြီး ကျွန်တော်ကို့လှမ်းမေးလိုက်ပါတယ်။
သူ့စကားသံကြားလိုက်ရတဲ့ နောက် မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အခွန်နှုန်းထား တစ်ခုကို ကြားလိုက်ရလို့ ကိုယ့်နားကိုယ်တောင် မယုံမကြည်ဖြစ်သွားပြီး နောက်တစ်ခေါက်ထပ်မေးလိုက်ရပါတယ်။
၅ သိန်း ၆ သိန်း ဆိုတာ နှစ်ခါထပ်ပြောလိုက်လို့ သေချာသွားမှန်း သိတဲ့နောက် ဒီရုံးကနေ ကမ္ဘာ အပြင်ဘက်အထိ ထွက်ပြေးချင်စိတ်တွေဖြစ်သွားရလောက်ရအောင် နိုင်ငံအခွန်ဥပဒေအပေါ် နားကျဉ်းစိတ်ဝင်သွားခဲ့မိသလို သေချာနားမလည်းတဲ့အပေါ် ရှင်းပြပေးဖို့ကျွန်တော်ထပ်တောင်းဆိုမိလိုက်ပါတယ်။
သိန်း၃၀ ၄၀ အရင်းအနှီး မျှနဲ့ လုပ်စားနေတဲ့ နိုင်ငံသားတစ်ယောက်အပေါ် အဲ့လောက်တောင် အခွန်ဆောင်ခိုင်းရသလား အစ်မရယ်၊ ကျွန်တော်က အိမ်ငှားပါဗျာ …..
နောက် ဆိုင်ဖွင့်တာလည်း ၇ လပဲရှိသေးသလို အိမ်က မိဘတွေကလည်း အိမ်ထောင်ကျပြီးကတည်းက သူတို့မိသားစုပိုင်တိုက်ခန်းကို တစ်လ တစ်သိန်းနဲ့ငှားပြီး သိန်း ၃၀ ကျော်လောက်နဲ့ ရင်းနှီးရောင်းဝယ်စားသောက်နေရတာ……
ဒီလောက်ကြီးများတောင် အခွန်သွင်းလိုက်ရင် ကျွန်တော်ဘယ်လိုများရှေ့ဆက် ရင်းနှီးစားသောက်ရမလည်းအစ်မရယ်…လို့ …အခွန်ဒုဦးစီးကို မေးကြည့်တော့သူမက ဒါလွှတ်တော်က တရားဝင်ချထားတဲ့ စည်းမျည်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ပဲတွက်ထားတာ.တဲ့…..
ဒါနဲ့ ဘယ်လိုများတွက်ထားသလည်းဆိုပြီးဒုဦးစီးအကြမ်းတွက်ထားတဲ့ စာရွက်စာရင်းကို လှမ်ကြည့်လိုက်တော့မိန်းမဖြစ်တဲ့ သူရဲ့ ထောက်ပံ့ကြေးမပါသလိုအိမ်ငှားစရိတ်တန်ဖိုးလည်းမပါဘူး ဖြစ်နေတာတွေ့လို့ ဒုဦးစီးကို ဒါတွေဘာကြောင့်သက်သာခွင့်ထဲ ထည့်မတွက်တာလည်းလို့မေးကြည့်လိုက်မိပါတယ်။
အဲ့ဒီအခါ ဒုဦးစီးကမိန်းမကို ထောက်ပံ့ကြေး တစ်နှစ်စာ ၁၀ သိန်းမပေးတာကသန်ခေါင်စာရင်းထဲမပါလာလို့ပါတဲ့။
ဩော် ….မိန်းမယူပြီးပေမဲ့ စာရင်းမရှိလို့ ကိုယ်ယူတဲ့မိန်းမတောင် ကိုပြန်မကျွေးမွေးနိုင်တော့ပဲ အစိုးရကို မိန်းမထောက်ပံ့ငွေ ၁၀ သိန်းကိုပါရောအခွန်ပေးရတော့မဲ့ဘဝ ရောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။
အိမ်ငှားခ ထည့်မနှုတ်တာကတော့ ရှင်တို့ အိမ်ရှင်၊အိမ်ငှားစာချုပ် ချုပ်တုန်းက အိမ်ရှင်ဘက်က အခွန်ရုံမှာ အိမ်ငှားခ တန်းဖိုးရဲ့ ၁၀ ရာခိုင်းနှုန်းကို လာပြီး မသွင်းတဲ့အတွက်ထည့်မနှုတ်ပေးတာပါတဲ့…။
တကယ်လို့ ရှင်တို့အိမ်ရှင်ဘက်ဆောင်မယ်ဆိုရင် တစ်လ တစ်သိန်းနဲ့ ၁၂လစာ ၁၂ သိန်းအမောက်ပေါ် ၁၀% နဲ့အညီ တစ်သိန်း နှစ်သောင်းသွားသွင်းရမယ်တဲ့။
ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရောက်လို့ ၂၀၁၅ ပြည်ထောင်စု အခွန်ကောက်ဥပဒေကိုဖတ်ကြည့်တော့ အိမ်ငှားလို့ရတဲ့ငွေအပေါ် သက်သာခွင့်နူတ်ပြီးမှ ကျန်တဲ့ ငွေကိုသာ ၁၀% အခွန်စည်းကြပ်ခွင့်ရှိတာတဲ့။
နောက်အိမ်ငှားပြီးဆိုင်ခန်းဖွင့်ရင်းနှီးစားနေကြရတဲ့ သူတွေလည်း အစိုးရအခွန်ရုံးစီ အိမ်ရှင်ကသွားအခွန်ဆောင်ပေးကြလေ့ မရှိတဲ့အတွက် စရိတ်သက်သာခွင့်ထဲ အိမ်ငှားခတွေပါ မနူတ်ရပဲ တန်ပိုးနစ်စွာအခွန်ဆောင်ကြရမဲ့ အိမ်ငှားဘဝတွေကို စာနာတွေးကြည့်ပြီး အတော်လေးစိတ်မကောင်ဖြစ်မိခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒီထက်အဆိုးဆုံးအခွန်ပြသနာကို ရင်ဆိုင်ရတာကတော့ ဒုဦးစီးရဲ့ ကုန်ဖိုးအရင်းနူတ်တဲ့ တွက်နည်းပါပဲ။
ကျွန်တော်က ဆန်ဆိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက် ကုန်သွယ်ခွန် မဆောင်ရပေမဲ့ တစ်နေ့ရောင်းအား ၁၅၀၀၀၀ ကျပ်နဲ့ တစ်နှစ်စာ ၅၄၀၀၀၀၀၀(ငါးရာ လေးဆယ်)ပေါ် ကုန်ဖိုးအရင်း ၆၀% နဲ့ သာတွက်ပြီး ၃၂၄၀၀၀၀၀ (သုံးရာနှစ်ဆယ့်လေးသိန်း)သာ နူတ်ပေးပြီးတွက်လိုက်ခြင်းပါပဲ။
ရောင်းရငွေအပေါ် ကုန်ဝယ်အရင်းတန်ဖိုးနှုတ်ပြီး စာရင်းရှိ ကျွန်တော့်ရဲ့ တစ်နှစ်စာ အမြတ်ကတော့၂၁၆၀၀၀၀၀(နှစ်ရာတစ်ဆယ့်ခြောက်သိန်း) ရလာပါတယ်။
သူ တွက်ပြပေးတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့တစ်နှစ်စာအမြတ်ကိုကြည့်ပြီး ဥပဒေနည်းလမ်းကျကျ တွက်ချက်ထားမှုအပေါ် ဘယ်ဟာ မှားသလည်းဆိုတာကိုဝေခွဲမရဖြစ်ရင်ရူးချင်သလိုလို၊ဂေါက်ချင်သလိုလိုတောင်ဖြစ်သွားပါတယ်။
ဝင်ငွေကနည်း အရောင်းဝယ်ကအေးလို့ အထွေးထွေးစ ရိတ်တွေကြီးမြင့်မှုတွေကြား နေ့ဖို့ညစားတောင်တွက်စား၊ရင်းစားနေကြရတဲ့နိုင်ငံသားပိုင်အသေးစား လုပ်ငန်းရှင်ဘဝမှာ….
အမှန်လက်တွေ့ရတဲ့အမြတ်နဲ့ ရာခိုင်းနူန်းထားတွက်ချက်ထားတဲ့ အစိုးရအခွန်စာရင်း တွေကြားတော်တော်လေးကွဟလွန်လို့ ကျွန်တော်အဲ့လောက်ဆို မဆောင်နိုင်ဘူးလို့ ပဲပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလိုက်ပါတယ်။
အခွန်ဒုဦးစီးက ဘယ်လောက်ဆို ပေးနိုင်မလည်းတဲ့.ညှိတွက်ပေးလို့ရပါတယ်တဲ့….ကျွန်တော်ကညှိတွက်တာထက် အစိုးရကို သတ်မှတ်အခွန်နူန်းထားအမှန်တိုင်ဆောင်ချင်တာပါ အစ်မရယ်။
ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ပြည့်သူ့အခွန်ဆုံးရှုံးရင် အစိုးရဆင်းရဲသွားနိုင်သလို အစိုးရဆင်းရဲရင် နိုင်ငံလည်းဆင်းရဲသွားမှာပါ။နိုင်ငံဆင်းရဲသွားရင်၊ပြည်သူ့အခြေခံအဆောင်ဦးတွေမဖော်ဆောင်တော့သလို ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ ဆင်းရဲနေတာသိရဲ့နဲ့ အခွန်ကိုရှောင်ပြီး …..
ကြီးပွားနေသူတွေ ရှိမယ်ဆိုရင်လည်း အဲ့ဒီလူတွေဟာ ကမ္ဘော့အလည်မှာ အရှက်တရားမရှိပဲ ဝါးလုံးခေါင်းထဲကသာတစ်သက်လုံး လသာနေတာကို ကြည့်သွားရမဲ့လူတွေပါအစ်မရယ်။
အဲ့ဒီတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ အခွန်ဆောင်ဖို့ လိုသလို အခွန်ဆောင်ခြင်းအလုပ်ကိုလည်းပြည်သူတွေမကြောက်အောင် ဆောင်ဖို့ မရှောင်ရအောင် ဥပဒေကလုပ်ပေးရမှာ အခုအစ်မတို့ရဲ့ ဥပဒေအရ ကုန်ဝယ်အရင်းအနှီးတွက်ထားပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် လက်တွေ့မြန်မာပြည်ရဲ့အရောင်းအဝယ်အမြတ်အစွန်းနဲ့ မတရားကွာလွန်နေတယ်။
ကျွန်တော်က ဆန်ဆိုင်ဖွင့်ထားတာမို့ အစ်မကို ဆန်အမြတ်နဲ့ပဲ အကြမ်းမျဉ်းတွက်ပြမယ်…….
အခုလိုဈေးဆိုင်တွေအပြိုင်အဆိုင်များတဲ့ခေတ်မှာ ၃၅၀၀၀၀ သုံးသောင်းခွဲတန်ဆန်တစ်အိတ်ကို လက်ကားရောင်းရင် ၅၀၀/၁၀၀၀၊ လက်လီရောင်းရရင် ၂၀၀၀ ကျော် ၃၀၀၀ မြတ်တာပါအစ်မရယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အများဆုံးအမြတ် ၃၀၀၀ နဲ့ပဲထားပြီး တစ်နေ့ ရောင်းရငွေ ၁၅၀၀၀၀ အပေါ် အမြတ်ပြန်တွက်ပြရရင် တစ်အိတ် ပျမ်းမျှ ၃၅၀၀၀ နူန်းနဲ့ ၄ အိတ်ကျော်သာ ရောင်းရပြီး တစ်နေ့တာအမြတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အများဆုံးအမြတ် ၃၀၀၀ နဲ့ပဲထားပြီး ……
တစ်နေ့ ရောင်းရငွေ ၁၅၀၀၀၀ အပေါ် အမြတ်ပြန်တွက်ပြရရင် တစ်အိတ် ပျမ်းမျှ ၃၅၀၀၀ နူန်းနဲ့ ၄ အိတ်ကျော်သာ ရောင်းရပြီး တစ်နေ့တာအမြတ်က ၈၀၀၀၊တစ်နှစ်တာအမြတ်က ၄၃၈၀၀၀၀ (လေးဆယ် သုံးသိန်း ရှစ်သောင်းပဲ ရပါတယ်အစ်မရယ်။
ကျွန်တော်တို့ အသေးစားလုပ်ငန်းရှင်တွေ တကယ်ရတဲ့ အမြတ်ထက် အစိုးရအခွန်ရာခိုင်နူန်းနဲ့ တွက်ထားတဲ့ အမြတ်က ဘယ်လောက်များသလည်းဆိုရင် ၁၇၂၂၀၀၀၀ (တစ်ရာ ခုနှစ်ဆယ့် နှစ်သိန်း နှစ်သောင်း တောင် များလိုက်တာ အစ်မရယ်..။
တကယ်ဆို ကျွန်တော် အမှန်တကယ် ဆောင်သင့်တဲ့အခွန်က ရောင်းရငွေ ၁၅၀၀၀၀ အပေါ် ကုန်ဖိုးအရင်းနူတ်ပြီး ကျန်တဲ့ အမြတ် ၄၃၈၀၀၀၀ ထဲက အထွေထွေအသုံးစရိတ်တွေဖြစ်တဲ့စည်ပင်ခွန် ၄၀၀၀၀၊မီတာခွန် တစ်လ၇၀၀၀ နဲ့ တစ်နှစ်စာ ၈၄၀၀၀ ၊
အလုပ်သမားခ(စားသောက်နေထိုင်စရိတ်အပါ)တစ်လ ၁၂၀၀၀၀ နဲ့ တစ်နှစ်စာ ၁၄၄၀၀၀၀၊ အိမ်ငှားခတစ်နှစ်စာ ၁၂၀၀၀၀၀၊ မိန်းမကိုထောက်ပံ့ငွေ ဆယ်သိန်း၊စုစုပေါင်း ၃၇၆၄၀၀၀ နုတ်ပြီး ကျန်ငွေ ၆၁၆၀၀၀ ပေါ်သာ အခွန်စည်းကြပ်သင့်တာပါဗျာ…။
၁၅၀၀၀၀ ရောင်းအားသာရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့အပေါ် အခွန်အများဆုံကျမယ်ဆိုရင်လည်း ၄၀၀၀၀/၅၀၀၀၀ ဝန်ကျင်ပေါ့။တစ်ကယ့်လက်တွေ့အမြတ်နဲ့သာ တွက်မယ်ဆိုရင် တစ်နေ့ ၂ သိန်း ၃ သိန်း ရောင်းအားရှိတဲ့ လုပ်ငန်းပေါ် အခွန်ကျရင်တောင်အများဆုံး ၁ သိန်း ကျော်လောက်ပဲ ကျသင့်တော့သလို…..
တစ်နေ့ ၁ သိန်းအောက်ရောင်းရတဲ့ လုပ်ငန်းတွေအပေါ် တရားဝင် အခွန်ဆောင်ရမယ်ဆိုရင်လည်း ၂၀၀၀၀/၃၀၀၀၀ တာကျသင့်တာမို့ ဘယ်ပြည်သူပြည်သားမှ အခွန်ရှောင်ကြတော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ယူဆမိပါတယ်။
အခုတော့ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ဈေးကွက်ကြား သူငါ အပြိုင် နည်းပါးတဲ့အမြတ်တွေနဲ့ယှဉ်ပြီး ရောင်းလို့ ရလာတဲ့ တစ်သိန်းခွဲရောင်းအားအပေါ် ဆန်ကုန်ဖိုးအရင်းကို ၆၀% နဲ့တွက်ပြီး ထွက်လာတဲ့ အမြတ်က သိန်း နှစ်ရာနီးပါးဖြစ်သွားတဲ့ အတွက် အခွန်စည်းကြပ်မှု့ တန်ဖိုးကလည်း ၆ သိန်း ကျော် ၇ သိန်းကျော် ၈ သိန်းကျော်တွေအထိ ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။
အဲ့ဒီလိုတွက်ပြတော့ အခွန်ဒုဦးစီးက အခွန်များရင် အမြတ်ပိုတင်ရောင်းပေါ့လို့ အကြံပေးပြောလာပါတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း ကျွန်တော်တို့ လက်လုပ်လက် စားအရောင်းအဝယ်သမားတွေအပေါ် နားမလည်းနိုင်သေးတဲ့ အတွက် တစ်ခါထပ်ပြီး
အစ်မရယ် ကျွန်တော်တို့တိုင်ပြည်ထဲ ပညာတတ်တွေရော၊ပညာမဲ့တွေရောပါ အခွင့်လမ်းတွေနည်းပါကြလို့ အကြံကုန်ဈေးရောင်းဆိုတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ နိုင်ငံကြီးသားပီသစွာ သတ်မှတ်အခွန်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် ပုံမှန်အမြတ်ထက် ၅ ထောင် ၆ ထောင်တင်ရောင်းလိုက်ရင် ဒီအခွန်ရုံကိုတောင် ကျွန်တော်ရောက်လာနိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဗျာ ။
ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ အရင်းအနှီးကြွယ်ဝသူအိမ်ရှင်မြေရှင်တွေက အမြတ်နည်းနည်းနဲ့ ဈေးကွက်လုပြီးယှဉ်ရောင်းလိုက်လို့ အရင်းပြုတ်ပြီးရွာပြန်သွားရလို့လေ..ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။
ဒုဦးစီးမှူးရဲ့အခွန်တွေတွက်ချက်လာမှု့အပေါ် နားမလည်နိုင်ဖြစ်နေသေးတဲ့ ရာခိုင်နူန်းနဲ့ ကုန်ဖိုအရင်း နုတ်တဲ့အပေါ် မေးကြည့်တော့ …..အစ်မတို့ က ကုန်တန်ဖိုးကို ရာခိုင်နူန်းနဲ့ ယှဉ်ပြီးတွက်ချက်ပေးရတဲ့ ပုံစံက ဆန်ဆိုဘယ်လောက်၊ ဟိုပစ္စည်းအမျိုးအစားဆို ဘယ်လောက်ရယ်ဆိုတရားဝင်သတ်မှတ်ထားတာမရှိပါဘူး။
တစ်ချို့ကုန်တန်ဖိုးအရင်းကို နုတ်တဲ့အခါ ရောင်းရငွေအမောက်ပေါ်ကြည့်ပြီး ၂၅%၊ ၃၀%၅၀% ၆၀%_၇၀%နဲ့ အများဆုံး ၇၅ % အထိပဲ နုတ်ပေးတာ။ စားသောက်ဆိုင်တွေဆို ၂၅% ၃၀% လောက်အထိပဲ ကုန်တန်ဖိုးအရင်းကို ထားတွက်ပေးတာ။ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့သူတို့က ပိုအမြတ်ကြီးလို့လေ။
ဒါဆိုအစ်မပြောတဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ၁၀၀% ရာခိုင်နှုန်း ရောင်းရငွေပေါ် အများဆုံး အမောက်ဖြစ်တဲ့ ၇၀% ရာခိုင်း ကုန်တန်ဖိုးအရင်းထားပြီး နုတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်…….ဥပမာ သိန်း ၁၀၀ နဲ့ရောင်းရတဲ့ကားပေါ် ကုန်အရင်းတန်ဖိုး ၇၀ ပဲ.နုတ်ပေးပြီး..အမြတ်ကို သိန်း ၃၀ ထားတွက်ချက်ပေးမှာပေါ့။
နောက်ဥပမာ ..ကျွန်တော်တို့ဆန်တစ်အိတ် ၄၀၀၀၀ နဲ့ ရောင်းရတဲ့နှုန်းထားပေါ် ၇၀% အမောက်ဖြစ်တဲ့ ၃၈၀၀၀ အရင်းနုတ်ပြီးဆန်တစ်အတ်ကို( ၃၀%) ၁၂၀၀၀ကျပ် မြတ်တယ်ဆိုတဲ့ နူန်းထားနဲ့ ထားတွက်နေသလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်…..အေးဟုတ်တယ်။
အဲ့ဒါဆိုအစ်မတို့ အခွန်ဥပဒေက သာမှန်ထက်ပိုတဲ့ မတန်တဆအမြတ်တွေထားတွက်ပြီး အခွန်ထမ်းတဲ့ ပြည်သူတွေအပေါ် ရာခိုင်နူန်းနဲ့ လိမ်ညာကောက်သလို ဖြစ်နေတာပေါ့။
အေး ……အဲ့ဒါကြောင့်လည်းတကယ့်ပိတ်ဆံရှိသူတွေထဲလည်း အခွန်အမှန်မဆောင်သူတွေများနေတာပေါ့။ပြင်ချင်ရင်မောင်လေးလွှတ်တော်အမတ်လုပ်ပြီးဝင်ပြင်မှပဲရမယ်။
တကယ်လို့ ကျွန်တော်က အခွန်ဥပဒေအရ ဆိုင်ကဝင်ငွေ၊ရင်းငွေထွက်ငွေ တန်ဖိုးတွေကို တစ်လတစ်ခါရှင်းပြီး ၃ လ တစ်ကြိမ် ပို့ပေးမယ်ဆိုရင် ရော အစ်မတို့က ရာခိုင်နူန်းနဲ့ ပဲ ထားတွက်မှာလို့မေးကြည့်တော့ ……..
အဲ့ဒီလိုပို့ပေးရင်တော့ မင်းတို့ဝင်ငွေ၊ထွက်ငွေစာရင်းကိုစစ်ပြီး တွက်ချက်ပေးမှာပေါ့တဲ့။ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်လကစပြီး စာရင်းပြုစုပြီး လုပ်ပေးထားမယ်။ ကျွန်တော်ချစ်တဲ့အစိုးရကို အခွန်အပြည့်အဝပေးနိုင်အောင် လည်းကြိုးစားသွားပါမယ်။
ဒါပေမဲ့ အခု အစ်မ တွက်ထားတဲ့ အခွန် ၅ သိန်း ၆ သိန်းတော့ ကျွန်တော်မဆောင်နိုင်လောက်ဘူး။ကျွန့်တော့်အရင်းအနှီးကလည်း ဘာမှ ရှိသေးတာမဟုတ်တဲ့အတွက် အစ်မတွက်ထားတဲ့အခွန် ၅သိန်း ၆သိန်းတော့မဆောင်နိုင်ဘူးဗျာလို့ငြီးလိုက်ပါတယ်။
ဒုအခွန်ဦးစီးအစ်မက တစ် သိန်းခွဲရောဆောင်နိုင်မလားတဲ့။ အဲ့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်ပေးနိုင်လောက်မယ်။ဒါနဲ့ အမက ဘယ်လိုတွေပြန်တွက်မှာလည်းလို့မေးကြည့်တော့
ဟိုဟာလျော့၊ဒီဟာတိုးလုပ်ပေးရမှာပေါ့။အစ်မတို့က ဥပဒေစာအုပ်ကြီးတိုင်သွားလို့မရဘူးလေး၊မင်းတို့ အခွန်ထမ်းတွေ ကျင်နပ်အောင်လုပ်ပေးဖို့ကအဓိကပါပဲတဲ့။
အဲ့ဒီလိုနဲ့ ဒုအခွန်ဦးစီးနဲ့ အခွန်ဆောင်ရမဲ့တန်ဖိုးကို ညှိနိုငိးပြီးအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ရပေမဲ့ ကျွန်တော့်ရင်ထဲ တရားဝင်အခွန်ဆောင်ကြေးကို အစိုးရစီပေးချင်ပေမဲ့ ပြင်းထန်းတဲ့ အခွန်စည်းမျဉ်းဥပဒေတွေခြားထားတဲ့အတွက် ညှိနိုင်းလုပ်ခဲ့ရတဲ့အပေါ် ငါ နိုင်ငံနဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ပြည်သူ့အစိုးရအပေါ် တာဝန်ကျေခွင့်မရှိသေးတဲ့ လူတစ်ယောက်ပါလားလို စိတ်မကောင်းကြီးစွာတွေးမိရင် ရင်နာနာနဲ့ပြန်ခဲ့ရပါတယ်။
အိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့ ၂၀၁၅ အခွန်အကောက်ဥပဒေစာအုပ်ကို ဖတ်ကြည့်မိတဲ့အခါမှာတော့ အခန်း(၆) ဝင်ငွေခွန် ဥပဒေ နံပတ် (၂၉)မှာ အသစ်ထူးထောင်သော လုပ်ငန်းသစ်များအတွက် လုပ်ငန်းစတင်ကာလမှစ၍ ……
၃ နှစ်အတွင်း ဝင်ငွေ ကျပ်သိန်း တစ်ရာအထိ ဝင်ငွေခွင်ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိပြီး ၁၀၀ ထက်ပိုသော ဝင်ငွေအပေါ်တွင်သာ အခွန်စည်းကြပ်ရမယ်လို့ ပြဌာန်းထားတာကိုဖတ်လိုက်ရမှ………
ဩော် ….ဒုအခွန်ဦးစီးက လုပ်ငန်းသက် ၇ လသာရှိသေးတဲ့ ငါ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းသစ်ပေါ် အခွန်ဥပဒေက သက်သာခွင့်ပေးထားတဲ့ သိန်း တစ်ရာ ဝင်ငွေခွန်ကို ထည့်သွင်း မနုတ်ပဲ တွက်ချက်လိုက်တဲ့အတွက်…….
အခွန်အလွန်ပြင်းထန်သွားမှန်း ၊ ကျွန်တော် ပေးဆောင်သင့်တဲ့အခွန်ထက်ပိုပြီး အစိုးရစီ လှူဒါန်းလိုက်ရမှန်း သိလိုက်ရတဲ့အတွက်အလွန်ပဲ စိတ်သက်သာရာ ပြန်ရခဲ့ပါတယ်။
တကယ်တော့ ဥပဒေဆိုတာ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအတွက် အကာကွယ် တံတိုင်းကြီး တစ်ခုသဖွယ်သော်၎င်း ၊ ဘက်လိုက်မှုကင်းသော မိတ်ဆွေအဖြစ်၎င်း ၊အမှန်တရာအတွက် လက်စုပ်လက်ကိုင်ပြုထားရသော လက်ဝတ်တန်ဆာဖြစ်၎င်း ၊ တန်ဖိုးထားသင့်တာမို့ ပြည့်သူဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဥပဒေ ကို အကြောင်းပြပြီး ……
ဥပဒေနဲ့ ပြည်သူကို ဝေးအောင် မခြောက်လှန့်ကြပါနဲ့လို့မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ ……..။
ဥပဒေနဲ့ ပြည်သူကို သွေးမခွဲပါနဲ့လို့မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ……။
ဥပဒေ နဲ့ ပြည်သူကြား လာဘ်စားမှုတွေမသွတ်သွင်းကြပါနဲ့လို့ မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ…။
နိုင်ငံသားမှန်ရင် အခွန်ဆောင်ခြင်းဖြင့် တိုင်းပြည်အကျိုးကို သယ်ပိုးနိုင်ကြပါစေ…..။
လူငယ်မိုးလှိုင်း / အခွန်ရုံးသွား၍မေးမြန်းသိရှိခဲ့သမျှကို အမှန်အတိုင်ရေးခြင်းဖြစ်သည်။ Richard Ye Myint
မသန်စွမ်းတဲ့ ညီလေးကိုလည်း ထိန်း၊ ကျောင်းလည်းတက်နေရတဲ့ စွန့်ပစ်ခံကလေးငယ်